အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပိုးဟပ်၊ပုရွတ်ဆိတ်၊ခြင်စတဲ့.အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေရှိနေရင်ဒီလိုလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ။ – Lawkathuta
ဗဟုသုတအစုံ May 13, 2018
အိမ်တိုင်းမှာအင်းဆက်ပိုးမွှားတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။အစားအသောက်အကြွင်းအကျန်တွေနားမှာ ၊ညစ်ပတ်တဲ့နေရာတွေကတော့အင်းဆက် ပိုးမွှားတွေအကြိုက်ပေါ့။
အင်းဆက်တွေကရောဂါပိုးတွေကိုသယ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ မတော်တဆသင့်ရဲ့အစားအစာတွေမှာလာနားနေရင် စားမိတဲ့အခါ အစာအိမ်ထဲကို ဘတ်တီးရီးယားပိုးတွေ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာအများဆုံးရှိနေနိုင်တဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကတော့ ပိုးဟပ်၊ပုရွတ်ဆိတ်နဲ့ခြင်ပါပဲ။
ဒါဆို အဲ့ဒီအင်းဆက်ပိုးတွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ပိုးဟပ်တွေက တကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းသလိုဟိုပျံဒီပျံနဲ့တစ်ခါတစ်လေအစားအသောက်တွေလည်း လာနားတတ်ပါသေးတယ်။
အားလုံးရောမွှေပြီးရင်ပိုးဟပ်တွေ လာတတ်တဲ့အချိန်၊အများဆုံးရှိတဲ့အချိန်သွားချထားလိုက်ရုံပါပဲ။အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခါ ပိုးဟပ်တွေမလာရဲတော့ပါဘူး။တစ်ခါနဲ့မရရင်ပိုးဟပ်တွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့အထိလုပ်ပေးပါ။
ပုရွက်ဆိတ်တွေကနေရာအနှံ့မှာရှိနေတတ်ပါတယ်။အမည်းဆိုတော်သေး၊ အနီတွေဆို ကိုက်ရင်လည်းဒဏ်ရာကဖြစ်ဦးမယ်။ ပုရွတ်ဆိတ်တွေရှိနေတာကို မလိုချင်ဘူးဆိုရင် ပုရွတ်ဆိတ်တွေအုပ်လိုက်ရှိတဲ့နေရာမှာ Cornmeal (ပြောင်းဖူးအခြောက်စေ့တွေက ရတဲ့အမှုန့်)အနည်းငယ်ကိုဖြူးထားလိုက်ပါ။တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကြာရင်သိသာလာပါလိမ့်မယ်။
ခြင်တွေကလည်းညဘက်ဆိုဘယ်ကနေထွက်လာမှန်းမသိအများကြီးထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ရိုက်တော့လည်းမြန်ဆန်တဲ့အကောင်တွေမို့အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါဆိုရင်ခြင်တွေကိုဘယ်လိုမောင်းထုတ်ကြမလဲ? လာဗင်ဒါပန်းအဆီတစ်စက်ကနေ၃စက်ထိ၊ပူစီနံဆီ၊ယူကလစ်ဆီတစ်စက်နှစ်စက်ကို သန့်ရှင်းတဲ့ဖော့ တစ်ခုပေါ်ချလိုက်ပါ။အဲ့ဒီဖော့ကိုဖန်ခရားအိုးထဲထည့်ပြီး ၂၄နာရီပိတ်ထားပါ။ ၂၄နာရီပြည့်သွားရင် အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါ။အနံ့တွေကအခန်းထဲမှာပျံ့သွားပြီးခြင်ပြေးစေပါတယ်။
အိမျတိုငျးမှာအငျးဆကျပိုးမှားတှရှေိနတေတျပါတယျ။အစားအသောကျအကွှငျးအကနျြတှနေားမှာ ၊ညဈပတျတဲ့နရောတှကေတော့အငျးဆကျ ပိုးမှားတှအေကွိုကျပေါ့။
အငျးဆကျတှကေရောဂါပိုးတှကေိုသယျဆောငျလာနိုငျပါတယျ။ မတျောတဆသငျ့ရဲ့အစားအစာတှမှောလာနားနရေငျ စားမိတဲ့အခါ အစာအိမျထဲကို ဘတျတီးရီးယားပိုးတှေ ရောကျသှားနိုငျပါတယျ။အိမျမှာအမြားဆုံးရှိနနေိုငျတဲ့အငျးဆကျပိုးမှားတှကေတော့ ပိုးဟပျ၊ပုရှတျဆိတျနဲ့ခွငျပါပဲ။
ဒါဆို အဲ့ဒီအငျးဆကျပိုးတှကေို ဘယျလိုဖယျရှားရမလဲ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
ပိုးဟပျတှကေ တကယျ့ကိုစိတျပကျြစရာကောငျးသလိုဟိုပြံဒီပြံနဲ့တဈခါတဈလအေစားအသောကျတှလေညျး လာနားတတျပါသေးတယျ။
အားလုံးရောမှပွေီးရငျပိုးဟပျတှေ လာတတျတဲ့အခြိနျ၊အမြားဆုံးရှိတဲ့အခြိနျသှားခထြားလိုကျရုံပါပဲ။အဲ့ဒါဆိုနောကျတဈခါ ပိုးဟပျတှမေလာရဲတော့ပါဘူး။တဈခါနဲ့မရရငျပိုးဟပျတှလေုံးဝမရှိတော့တဲ့အထိလုပျပေးပါ။
ပုရှကျဆိတျတှကေနရောအနှံ့မှာရှိနတေတျပါတယျ။အမညျးဆိုတျောသေး၊ အနီတှဆေို ကိုကျရငျလညျးဒဏျရာကဖွဈဦးမယျ။ ပုရှတျဆိတျတှရှေိနတောကို မလိုခငျြဘူးဆိုရငျ ပုရှတျဆိတျတှအေုပျလိုကျရှိတဲ့နရောမှာ Cornmeal (ပွောငျးဖူးအခွောကျစတှေ့ကေ ရတဲ့အမှုနျ့)အနညျးငယျကိုဖွူးထားလိုကျပါ။တဈပတျနှဈပတျကွာရငျသိသာလာပါလိမျ့မယျ။
ခွငျတှကေလညျးညဘကျဆိုဘယျကနထှေကျလာမှနျးမသိအမြားကွီးထှကျလာတတျပါတယျ။ ရိုကျတော့လညျးမွနျဆနျတဲ့အကောငျတှမေို့အဆငျမပွပေါဘူး။ ဒါဆိုရငျခွငျတှကေိုဘယျလိုမောငျးထုတျကွမလဲ? လာဗငျဒါပနျးအဆီတဈစကျကနေ၃စကျထိ၊ပူစီနံဆီ၊ယူကလဈဆီတဈစကျနှဈစကျကို သနျ့ရှငျးတဲ့ဖော့ တဈခုပျေါခလြိုကျပါ။အဲ့ဒီဖော့ကိုဖနျခရားအိုးထဲထညျ့ပွီး ၂၄နာရီပိတျထားပါ။ ၂၄နာရီပွညျ့သှားရငျ အဖုံးကိုဖှငျ့လိုကျပါ။အနံ့တှကေအခနျးထဲမှာပြံ့သှားပွီးခွငျပွေးစပေါတယျ။
နတ်တွေ ကူညီခဲ့ဖူးတယ် —————————– ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မြင်အပ်မမြင်အပ် ၃၁ ဘုံသားတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပါတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပျောက်ကွယ်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာရင် နတ်တွက ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါတယ်။ ကွမ်လုံ ရက်လေးဆယ် တိုက်ပွဲမှာ မြန်မာစစ်တပ်က ဗိုလ်မှုးကြီးနှစ်ဦးနဲ့စစ်သား လေးဆယ်လောက်ဟာ တရုပ်စစ်သား ရှစ်ရာလောက်ကို အရှုံးပေးနေရပြီး …
လူကြီးတွေ ဘာကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် သေဆုံးကြရပါသလဲ
လူကြီးတွေ ဘာကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် သေဆုံးကြရပါသလဲ ( အသက်ကြီးတဲ.သူတွေအတွက် မှတ်သားသင်.တဲ.အရာမို. ပြန်လည်ဝေငှ လိုက်ပါသည် ) >>> ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ် ၀န်းကျင်လောက်က Thomas Vills “ သောမတ်စ် ဗီးစ် ” ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်သူအရမ်းချ စ်တဲ့ သူ့အဖိုး…သူ့ရှေ့မှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သွား …
ကောင်းလိုက်တဲ့စာ ခုခေတ် အပျိုလေးတွေကို ပြောထားတာ ပြန်လည်မျှဝေတာပါ (ဖတ်ကြည့် မှန်လွန်းလို့)
ကောင်းလိုက်တဲ့စာ ခုခေတ် အပျိုလေးတွေကို ပြောထားတာ ပြန်လည်မျှဝေတာပါ (ဖတ်ကြည့် မှန်လွန်းလို့) ခေတ်ကိုက*ရှယ်သွားပေးပါဦး* အပျိုလေးတွေဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ Fb မှာ မပီကလာပီကလာ ဆဲနည်းမျိုးစုံဆဲမှခေတ်မှီတယ်ထင်နေကြတယ် အပျိုလေးတွေဖြစ်ရဲ့သားနဲ့Facebookမှာ ဘဲနဲ့ပလူးပလဲပုံတွေ တင်တာကိုထမင်းစားရေသောက်ဖြစ်နေကြတယ် အပျိုလေးတွေဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ဘဲနဲ့hotelမှာအိပ်နေတဲ့ပုံတွေတင်ပြီး ရှက်ကြော ပျက်နေကြတယ် အပျိုလေးတွေဖြစ်ပြီး မယူရသေးတဲ့ဘဲကို ယောကျာ်း ချင်းမွှန်နေအောင်ခေါ်ရတာကို အရသာတွေ့ပြီး …
ပါချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ (အတ္ထုပ္ပတ္တိ)….
ပါချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ (အတ္ထုပ္ပတ္တိ)…. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (၁၃၀၁) ခုနှစ်၊တပေါင်းလပြည့်၊ (၁၉၄၀)ခုနှစ်၊မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ရွာ နေ ခမည်းတော် ဦးစံလှ+မယ်တော် ဒေါ်ခင်တို့မှ ဖွားမြင်သည်။ – (၁၃၀၅)ခုနှစ်၊(၁၉၄၄) အသက် ၅နှစ်သားအရွယ် စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ရွာ၊ ပေါ်တော်မှုကျောင်း၊ …
ကျည်ကာအင်္ကျီတွေ ဘယ်က အစပြုလဲ?
ကျည်ကာအင်္ကျီတွေ ဘယ်က အစပြုလဲ? ************** လက်နက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ လမ်းကြောင်းလွဲသွားစေဖို့အတွက် ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စစ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျည်ကာအင်္ကျီတွေဟာ သံချပ်ကာအင်္ကျီလို့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ plate armor တွေကနေ အစပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး သံချပ်ကာအင်္ကျီဟာ ဥရောပဒေသမှာ စတင်ပေါ်ထွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ခါစမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ …
မန်မာ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန် အစစ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြသလိုက်တဲ့ မြန်မာ …
သူဌေးကြီးဆုံးတော့ဇနီးသည်က ၁.၉ ဘီလျံအမွေရခဲ့ပြီး အိမ်ကဒရိုင်ဘာကိုယူလိုက်တဲ့အခါ ဒရိုက်ပါပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကား
‘သမီးလေးနဲ့ ဆင်တူဝတ်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေ မရိုက်ရဲတော့ဘူး’ ဆိုတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်